Muxuu sababsaday sarkaalkii qaabilsanaa amniga RW Rooble? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu sababsaday sarkaalkii qaabilsanaa amniga RW Rooble?
Cabdullaahi Codey, wuxuu ilaalada ku wargaliyay in ay ka hor waregaan gaari ay saarnaayeen, Fahad iyo afar askari oo dhar cad ah, kuwaasoo uu ku sheegay in ay yihiin culumo Qur’aan ku soo aqrineysa RW Saacid oo xanaansan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shaqada ka raacdeeyay Cabdullahi Mohamed Jaamac [Codeey], oo ahaa taliyihii horrinta 3-aad ee Ilaaladda Madaxtooyadda, gaar ahaanna qaabilsanaa amniga Ra'iisul Wasaaraha.
Cabdullaahi Codey, wuxuu ku heyb yahay Madaxweynihii hore Farmaajo, waxaana lagu baddelay Maxamed Cabdi Yare oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka ilaalada Madaxtooyada, kuna heyb ah Ra’iiul Wasaaraha Xilgaarsiinta.
Xil ka qaadista Cabdullaahi Codey, ayaa ku soo beegantay xilli uu dhawaan RW Rooble, sheegay in ay soo gaareen hanjabaado amni oo ka imanaya shaqsiyaad ku daaban Farmaajo, oo ka soo hor jeeda hoggaankiisa.
Sidoo kale, saraakiil hore uga soo shaqeeyay Madaxtooyada, xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in Cabdullaahi Codey, xalay uu guriga RW-hii hore Cabdi Faraax Shirdoon Saacid geeyay Fahad Yaasiin.
Guriga Saacid wuxuu ku dhagan yahay, hoyga Ra’iisul Wasaare Rooble, waxaana dadka booqanaya RW Saacid, sii maraan ilaalada RW Rooble, halkaas oo xalay si dhuumaaleysi ah uu sarkaalka shaqada laga raacdeeyay u marsiiyay Fahad Yaasiin.
Cabdullaahi Codey, wuxuu ilaalada ku wargaliyay in ay ka hor waregaan gaari ay saarnaayeen, Fahad iyo afar askari oo dhar cad ah, kuwaasoo uu ku sheegay in ay yihiin culumo Qur’aan ku soo aqrineysa RW Saacid oo xanuunsan.
Hayeeshee, kaamirooyinka qarsoon ee guriga Ra’iisul Wasaaraha [CC Camera], ayaa qabatay wajiga Fahad oo cimaamad isku qarinaya iyo afar askari oo dharcad ah, waana sababta ugu weyn ee keentay in la raacdeeyo taliyihii horrinta 3-aad.